Galaxy Note20 Ultra မော်ဒယ်တချို့မှာ အပူတက်လွယ်တဲ့ ပြဿနာရှိနေတယ် - Myanmar Tech News
Homepage / Tech News / Galaxy Note20 Ultra မော်ဒယ်တချို့မှာ အပူတက်လွယ်တဲ့ ပြဿနာရှိနေတယ်
By adminPosted on August 25, 2020 September 5, 2020
Samsung အနေနဲ့ Note စီးရီး စမတ်ဖုန်း ထုတ်နေတာ အဆန်းမဟုတ်တော့ပေမယ့် iFixit Tear Down လုပ်ထားတဲ့ အချက်လက်တွေအရ Note20 Ultra မှာ Thermal Solution ပိုင်း ဝိတ်လျှော့ထားတာမျိုး တွေ့လာရပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်း Galaxy Device မှန်ရင် တခြားဖုန်းတွေထက် ပိုပူလေ့ရှိသလို ပူရတဲ့ အကြောင်းပြချက်က Exynos SoC က လာတာပါ။ တနည်းဆိုရရင် Snapdragon နဲ့ တခြား Mobile Chip တွေထက် အပူပိုထုတ်လေ့ရှိတာမို့ များသောအားဖြင့် Samsung ဖုန်းဆိုရင် Heat တက်လွယ်တဲ့ ပြဿနာရှိတယ်။
No Copper Pipe Cooling
တောင်ကိုးရီးယားလို အေးမြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိစ္စမရှိပေမယ့် 4K ရိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်စေ ၊ GPS Tracking လုပ်လို့ CPU သုံးစွဲမှု များတဲ့အခါဖြစ်စေ Operating Temperature ဟာ သာမန်ဖုန်းတလုံး ရှိသင့်တဲ့ အနေထားထက် ပိုများလေ့ရှိပါတယ်။
ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင် အထွေထူး ပြောစရာ မလိုတော့သလို သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့လည်း တချိန်ချိန်မှာ ဒီပြဿနာကို လျှော့ချပေးမယ်လို့ တွေးရင်တွေး ၊ တောင့်တကြမှာပါ။
Massive Copper Pipe in Galaxy S10+ (Image: cNet)
ဒိအတွက် Galaxy Note9 မှာ Vapour Chamber Cooling ကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး စမတ်ဖုန်းရဲ့ Build Quality က တောင့်တင်း ခိုင်မာတဲ့အပြင် Thermal Performance လည်း ပိုကောင်းတဲ့အတွက် အများသူငှာ နှစ်ခြိုက်ခဲ့တာပါ။
Galaxy S10 နဲ့ Note10 မော်ဒယ်တွေမှာလည်း အဆိုပါ Copper Pipe နဲ့ Coupling လုပ်ထားတဲ့ Vapour Chamber ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး Heat Issue နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတိုင်းတာတစ်ခုထိ ထိန်းနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုရမှာပါ (ပူတာက ပူနေတုန်းပဲ)
Vapour Chamber Dropped
ဒါပေမယ့်လည်း Note20 Ultra Review တွေမှာ Emphasis လုပ်ခံရတဲ့အချက်က တခြား Snapdragon ဖုန်းတွေထက် ပိုပူတယ်လို့ ထောက်ထားတဲ့ အချက်ဖြစ်ပြီး iFixit အဆိုရ Copper Plate အစား Graphite Solution ကို သုံးထားလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ဖော်ပြလာပါတယ်။
SamMobile အဆိုရ 8K Recording လုပ်တဲ့ အချိန်5–6မိနစ်အတွင်း ပူတက်လာပြီး 45 ~ 46 Degree C အထိ ရှိလာခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားပြန်ပါတယ်။
Graphite Cooling in Galaxy Note20 Ultra (Image: The Verge)
အခုလို Heat Issue ရှိနေတာ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာမျိုး ဆိုပေမယ့် Reviewer တွေ ပါးစပ်ဖျားမှာလည်း တချို့တလေက အပူပြဿနာ မကြုံရဘူး။
Not all Note20 Ultra
ဒါကြောင့် Note20 Ultra မှာတောင် မတူညီတဲ့ Cooling Method သုံးထားမယ်လို့ ထင်ကြေးပေးထားပြီး တန်းတူ ဖြစ်နေရင်တော့ တရားသေ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။
ဒီအကြောင်းရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Samsung အနေနဲ့ တစ်စုံတရာ ပြောဆိုထားတာမျိုး မရှိပေမယ့် Galaxy Device တွေ ပူတာ ၊ Heat တက်လွယ်တာ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ အဆန်းမဟုတ်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
Familiar? (Image: iFixit)
Note20 Ultra မှာ Vapour Chamber Cooling ပါမလာဘူးဆိုမယ့် iFixit ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ Motherboard ဒီဇိုင်းက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ခြေလေးချောင်း သတ္တဝါနဲ့ ဆင်တူပြီး ပုံသဏ္ဍာန်ကို Star Wars Fan တွေ မျက်မှန်းတန်းမိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Posted in Tech NewsTagged Note20 Ultra, Samsung, Tech News, Vapour Chamber
Previous post HUAWEI nova 7SE ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
Next post GeForce MX450 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ အားသာချက်များ